ယုန်ထောင်ကြောင်မိ – Grab Love Story
အသက် ၁၉ ကျော်လို့ ၂၀ ပြည့်တော့မယ် တောသူဆိုတော့ လုံးကြီးပေါက်လှပေါ ခါးသေးရင်ချီ ဖင်လုံးကြီးကြီး…နို့အုံထွားထွားပေါ့…ရွာကာလသားတွေအကြိုက်ပေါ့ အမေတစ်ခုသမီးတစ်ခု..သူကတော့ ဘယ်ကာလသားမှစိတ်မဝင်စားဘူးသူသိတာက ‘စနေ’
သူနာမည်ကတော့ ‘စနေ’ လို့ခေါ်ပါတယ် မိသားစုတော့မရှိတော့ဘူး အသက် ၂၅ ငယ်ငယ်ထဲကမိဘတွေဆုံးပါးသွားပြီ စနေ ဆိုရင်တစ်ရွာလုံးကကြောက်တယ် သူကမဟုတ်မခံလေ..သူဟာသူတစ်ယောက်ထဲနေတယ် ဘယ်သူနဲ့မှမရောဘူး သူကိုစောက်ပြဿနာလာရှာရင်တော့ အဲ့ကောင်ဘဝကိုတော့မတွေးဝန့်စရာ သူကရွာအကြီးအကဲသူကြီးကိုတောင် သိပ်ဂရုမစိုက်ဘူး သူကြီးကလဲသူကိုသိပ်မဟုတ်ပဲနဲ့မစွတ်ဆွဲဘူးပေါ့ သူကြီးပါရှိန်ရတဲ့သူ သူအလုပ်ကတောတက်အမဲလိုက်တဲ့မုတ်ဆိုးလေးပေါ့…
“အခုမှ တောကပြန်ထွက်လာတာ ကိုမဲကြီးရေ”
ခဏနေတော့ မဲကြီး ထန်းတစ်မြူနဲ့ငရံခြောက်ပန်းကန်လာချပေးတယ်…
“ဘာမှမဟေနဲ့ ရော့ဒီ ဆက်သား တစ်တွဲ”
ပြောပြီး စနေတစ်ယောက် သူလွယ်လာတဲ့နှီးပလိုင်းထဲက ဆက်တစ်တွဲထုတ်ပေးလိုက်တယ်
“အော်အဆင်ပြေတာပေါ့ကွာစနေကလဲ မင်းအရင်လဲဒီအတိုင်းလဲသောက်နေကြပဲ မင်းထရည်လိုရင်ပြော ငါနောက်တစ်မြူ ချပေးမယ်”
“မင်းကိုပြောစာရှိလို့ ဒေါ်မိစိန်မကို မင်းသိတယ်မလား”
ယာတောဝိုင်းနောက်ကို ယုန်တွေစားကျက် ဆင်းလာတယ်တဲ့”
“ဟ..ခဗျားစောက်ပိုမပြောနဲ့ ကျုပ်ကမုတ်ဆိုးပါ ဒေါ်စိန်မတို့ဝိုင်းနောက်မှာ ဘယ်ယုန်စားကျက်မှမရှိဘူး”
“ငါမင်းကိုမလိမ်ဝန့်ပါဘူးကွာ ဟိုတလောကမှ ယုန်စားကျက်ဆင်းလာတာကွ”
“ငါ့ကို မိစိန်မ သမီး စန်းစန်းခင် လာပြောတာကွ”
“ငါ့ကိုယုန်ထောက်ချောက်လုပ်တက်လားတဲ့ ငါလဲမလုပ်တက်ဘူးဆိုတော့ အဲ့တာကိုကြီးစနေလာရင်ပြောလိုက်ပါတဲ့ယုန်စားကျက်ရှိတဲ့အကြောင်းကို ရရင်တော့သူတို့ကိုလဲဟင်းစားနဲနဲလောက်ပေးခဲ့ပေါ့တဲ့”
ကဇွန်းနဲ့မုန်လာခင်းနဲ့သီးပင်စားပင်တွေအစုံရှိတယ် အနားမှာလဲ ရေကန်ငယ်လေးတစ်ကန်ရှိတော့ သူတို့သားမိတွေအဆင်ပြေတာပေါ့ သူတို့သားမိနှစ်ယောက်ပဲရှိတယ် မနှစ်ကမှဖခင်ကြီးပိုးထိလို့ဆုံးသွားတော့
သီးပင်စားပင်သီးချိန်ပွင့်ချိန်ရောက်ပြီဆို သားမိနှစ်ယောက်ယာထဲဆင်းနေရတာပေါ့ ရွာထဲမှာတော့အိမ်တစ်လုံးရှိပါတယ်..
စနေတစ်ယောက်လဲ အနီးရှိခြုံစပ်မှာဝင်ပုန်းလိုက်တယ် သူအထင်ယုန်တွေဆင်းလာပြီပေါ့…
အသံလာရကြည့်လိုက်တော့ စန်းစန်းမ ဖြစ်နေတယ် စနေလဲခြုံစပ်ကထွက်မယ်အလုပ်
စန်းစန်းတစ်ယောက်ဘယ်သူမှမရှိဘူးဆိုပြီး ထမိန်အသာမပြီး သေးထိုင်ပေါက်ပြီပေါ့..”ရှဲ..ရှဲ..”
စနေကြည့်နေရင်အာခေါင်တွေခြောက်လာတယ် စန်းစန်းခင် စောက်ဖုတ်ကပန်းရောင်သန်းပြီအမွှေးလေးတွေနဲ့ စောက်ဖုတ်ကြားကထွက်လာတဲ့သေးကလဲ မိုးရွာလိုရေဇလောက်ကကြလာတဲ့ရေလားမှတ်ရတယ်…စနေလဲပုထုဇဉ်လူသားပဲ ကြည့်နေရင်းက အောက်ကငယ်ပါကထောင်လာတယ်..
“ရှန်.အဲ့..အဲ့…ဒါဆိုစောစောက စန်းစန်းအပေါ့သွားတုန်းကကိုကြီးစနေအဲ့နားမှာရှိတယ်ပေါ့..ဘာလို့စန်းစန်းလာတာကို ကိုကြီးရှိတာမပြောလဲ”….
“အို…”စနေ စန်းစန်းကိုဆွဲလှဲ့ပြီးအပေါ်ကိုတက်လိုက်တယ် ပြီးတော့စန်းစန်းရဲ့ ပါးတွေနမ်းနှတ်ခမ်းကိုအတင်းဖိနမ်းတာပေါ့..”ဟွန်း…အွန့်..အွန့်…”
“စန်းစန်း ငါစိတ်တွေထိမ်းမရတော့ဘူးဟာ ငါ..ငါ့ကိုခွင့်လွှတ်ဟာ..”
ကိုကြီးစနေကိုလဲကျွန်မစိတ်ထဲမှာစိတ်ဝင်စားနေတာကြာပါပြီ ကိုကြီးစနေက အေးတိအေးစပ်ကြီးနဲ့မိန်းမတွေနဲ့သိပ်အရောဝင်တာမဟုတ်ဘူး အခုကျွန်မကိုနမ်းနေတာတွေ ကျွန်မဘယ်နေနိုင်မှာလဲ ကျွန်မလဲယောက်ျားတစ်ယောက်အထိတွေဒါပထမဦးဆုံးပဲလေ…
အိုး..သူလီးကြီးက ကျွန်မစောက်ဖုတ်လေးကိုထောက်မိနေပြီရှင့် ကျွန်မဘယ်လိုနေနိုင်မှာလဲ
လက်တွေကလဲအညိမ်မနေဘူး..နို့တွေညှစ်လိုက်အောက်ကိုအတင်ထိုးပြီးဖင်တွေကိုညှစ်လိုက်ပေါ့ စန်းစန်းတစ်ယောက်အောက်ကနေ့ကော့ပြန်နေပါပြီ…စနေစန်းစန်းရဲ့အင်္ကျီလေးကိုချွတ်ချလိုက်ပါပြီ ပြီးတော့စန်းစန်းရဲ့စီမီးဘော်လီအင်္ကျီလေးကိုချွတ်အပြီး…
ဟာလှလိုက်တာ စန်းစန်းရဲ့နို့အုန်ကြီးကိုမြင်ပြီ စနေ မနေနိုင်တော့ဘူးအတင်းကုန်းစို့တော့တာပေါ့…”အို…ကိုကြီးစနေ့အား..အီး..”
စန်းစန်းဖီးတွေစွတ်တက်နေပါပြီ စနေရဲ့ခေါင်းတွေကိုအတင်းပြန်ပြီးသိုင်းဖက်ထားပါတော့တယ်…စနေခေါင်းပြန်မော့လာပြီး စန်းစန်းရဲ့နှတ်ခမ်းကိုတစ်ချက်လှမ်းစုတ်လိုက်တယ်စန်းစန်းလဲအလိုက်သင့်ပြန်စုတ်ပေးတာပေါ့…နှတ်ခမ်းစုတ်နေရာကစနေပြန်ခွာလိုက်တယ် စန်းစန်းကစနေကိုမျက်လုံးလေကလယ်ကလယ်နဲ့ပြန်ကြည့်နေတာပေါ့…စနေကသူအင်္ကျီတွေချွတ်လိုက်ပါတယ်..ပြီးတော့သူဘောင်ဘီတွေချွတ်မယ်လုပ်တော့…စန်းစန်းကစနေရဲ့လက်ကိုလှန်းကိုင်ပြီး
စနေလဲစန်းစန်းရဲ့နိုတွေစို့နေရာမှ ထမိန်ကိုအသာလေးအောက်ကိုချွတ်ချတာပေါ့…စန်းစန်းလဲဖင်လေးကိုအလိုက်သင့်လေးမြှေက်ပေးလိုက်တယ်…စန်းစန်းထမိန်ကွင်းလုံးချွတ်ကြသွားပါပြီ..စနေ စန်းစန်းရဲ့စောက်ဖုတ်လေးကိုကြည့်နေရာမှ တသွေးတွေမျိုချလိုက်ရတယ်”ဂလု”
“အာ..လူကြီးနော်ဘာတွေပြောနေတာလဲ”စန်းစန်းမှာနွဲ့တဲ့တဲ့အသံလေးနဲ့ပြန်ဆိုလိုက်တယ်…ပြောသာပြောရတယ်သူအဲ့လိုပြောတော့စန်းစန်းစောက်ဖုတ်လေးကျင်ကနဲဖြစ်ပြီး အရေလေးတွေတောင်စိမ့်ထွက်လာတယ် “အို..ကိုကြီး..အား..ရွှီး…အ..အ.”
“အား…စန်းစန်းကိုသက်နေတာလားကိုယ်ကြီးရယ်…” “ချစ်နေတာပါ..စန်းစန်းရဲ့ ကိုကြီးကစန်းစန်းကိုအချစ်တွေပေးနေတာ” ပြွတ်…ပြွတ်… ရွှတ်….
စန်းစန်းပြီးသွားပြီ အိုအရမ်းကောင်းလိုက်တာ ဘာနဲ့မှကိုမလဲနိုင်တဲ့ခံစားမှုတစ်ခုပဲ
စန်းစန်းပြန်ပြောရင်းနဲ့မျက်စိလေးအသာဖွင့်ကြည့်တော့ အို့…သူလီးကြီးက အကျောတွေထောင်လို့လီးကြီးကတန်းနေတယ် စန်းစန်းကြည့်ပြီးကျက်သီးတွေထကုန်တယ်…
“စန်းစန်းကို ကိုကြီးလုပ်ပေးသလို့ပေါ့ ဒါကြီးကို ဒါလေးနဲ့လေ..”ပြောပြီးစနေ့ကသူလီးကိုပြပါတယ်ပြီးတော့ စန်းစန်းရဲ့ပါးစပ်ကိုလက်နဲ့ထောက်ပြတယ်
စန်းစန်းသိတာပေါ့ ဒါသူစန်းစန်းကိုလီးစုပ်ခိုင်းတာပဲ..စန်းစန်းတွေဝေသွားတယ် လီးစုပ်ရမှာစန်းစန်းတစ်ခါမှဒါမျိုးမလုပ်ဖူးဘူး ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့အတွေအကြုံကလဲဒါပထမဆုံးလေ…စန်းစန်းအာခေါင်တွေခြောက်ကပ်လာတယ်..စုပ်လဲစုပ်ကြည့်ချင်တယ် စုပ်လဲမစုပ်ရဲဘူး..
“စန်းစန်း…ဘာဖြစ်လို့လဲ မလုပ်ပေးချင်ဘူးလား ဘာလဲကိုကြီးကိုမချစ်လို့လား..”
“အင်း..စန်းစန်းမလုပ်ပေးချင်လဲကိုကြီး အတင်းမလုပ်ခိုင်းပါဘူး…”ပြောပြီးစန်းစန်းရဲ့နို့တွေစို့လိုက်တယ် လက်ကလဲစန်းစန်းရဲစောက်ဖုတ်ကိုနှိုက်ပြီး စောက်စိလေးကိုချေပေးနေတာပေါ့ အိုး…စန်းစန်းစောက်ပတ်ကပြန်ယားလာပြန်ပြီ တစ်ကိုယ်လုံးကျက်သီးတွေထသွားတယ် ကိုကြီးကိုလဲသနားသွားတယ် စန်းစန်းကိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးခဲ့တာပဲ စန်းစန်းလဲကိုကြီးကိုပြန်လုပ်ပေးသင့်တာပေါ့ စန်းစန်းဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ…
စန်းစန်း စနေရဲ့ခါးကိုကိုင်ပြီးပတ်လက်ပြန်လှန်လိုက်တယ် ပြီးတော့စနေရဲ့ပေါင်ဂွကြားကိုသွားပြီး
“သွားမသိဘူး သူကြိုက်သလိုပြော ကြိုက်သလိုလုပ်တော့” စန်းစန်းလဲကြာကြာမမူနိုင်ပါဘူး အဲ့လိုတွေပြောလေစန်းစန်းဖီးတွေတက်လေပဲလေ…
စနေလဲစန်းစန်းရဲပေါင်းနှစ်လုံးကြားဝင်ပြီး စန်းစန်းရဲ့စောက်စိကို လီးထိပ်နဲ့ထိုးချေတာပေါ့ “အား..ကောင်းလိုက်တာကိုကြီးရယ်” စန်းစန်းဖီးတွေပြန်တက်လာပါပြီ စနေကလဲလီးထိပ်နဲ့စောက်စိကိုထိုးချေလိုက်လက်ကလဲနိုးသီးတွေကိုညှစ်ပြီနယ်ပေးနေတာပေါ့ စန်းစန်းကော့လန့်လာပါပြီ စန်းစန်းမနေနိုင်တော့ဘူး စနေသိပါတယ်
“စန်းစန်း ကိုကြီး စန်းစန်းကိုလိုးတော့မယ်နော်”
ပြောပြီးစနေသူလီးကိုအရင်းကနေကိုင်ပြီး စန်းစန်းစောက်ပတ်ထဲကို ထိုးစိုက်လိုက်တာပေါ့ “ဗြိ…ဗြွတ်…”
“အင်းရတယ်ကိုကြီး လိုးလိုး စန်းစန်းအောင့်ခံပေးမယ်”
စန်းစန်းလဲစနေပေါ်ကဆင်းပြီးလေးဘက်ကုန်းပေးတာပေါ့..စနေကစန်းစန်းနောက်မှာနေရာဝင်ယူပြီး စန်းစန်းရဲ့စောက်ဖုတ်ထဲကို သူလီးကြီး
နောက်ကနေစန်းစန်းရဲ့ဖင်ကြီးကိုကြည့်ပြီး စနေဖီးတွေတက်နေပြီး စန်းစန်းဖင်ကြီးနှစ်လုံးကိုဖြဲကိုင်ပြီး
စန်းစန်းပြီးသွားပါတယ် စနေလဲပြီးချင်လာတော့ မနားတန်းစောင့်စောင့်ချပါတော့တယ်..
“ဟုတ်အမေ သမီးလဲကိုကြီးစနေကိုဝိုင်းလုပ်ပေးနေတာ အဲ့တာကြောင့်ကြာနေတာ…”
အရီးစိန်မလဲရှေ့ကနေထွက်သွားတာပေါ့ နောက်ကနေ စနေရယ်စန်းစန်းခင်ရယ်လိုက်လာပြီး
“အော် အဲ့တာလား ကြောင်မလေးကဟော့ဒိမှာ ဒီကြောင်မလေးကိုမိတာပေါ့ ဇီးတောင်တင်ပေးလိုက်သေးတယ်လေ”
“ဒီညလဲ ကြောင်မလေးကိုဖမ်းပြီး ဇီးတင်ပေးဦးမယ်နော်”